Ihe I Kwesiri Mara Banyere Australian Labradoodle - Reeddịrị
E nwere onye ọzọ na-emepụta ihe na obodo nke bara uru mkpuchi - Australian Labradoodle!
Mana site n'ọtụtụ doodle n'ime ụwa canine, ndị hụrụ nkịta n'anya kwesịrị ịmara ụdị dị iche iche! Yabụ tupu ịgbakwunye Australian Labradoodle dị ka akụkụ nke ezinụlọ gị, wepụta oge iji mụta banyere ha.
Nọgide na-agụ akwụkwọ ndu anyị iji mara ma ọ bụrụ na nke a bụ ezigbo ngwakọ maka gị.
Mmalite: Akwụkwọ akụkọ Labradoodle nke Australian
Kedu ihe Labradoodle nke Australia yiri?
Njirimara na Persondị mmadụ nke Australian Labradoodle
Etu ị ga-esi lekọta ụlọ nyocha Australia
Otu Labradoodle nke Australia ọ bụ Dog Ahụike?
Ebee ka m nwere ike zụta ma ọ bụ nakweere Labradoodle nke Australia?
Naanị klọb ndị e lekwasịrị anya na Australian Labradoodles
Na-atụle Australian Labradoodle na Doodles ndị ọzọ
Gịnị Mere M Ji Zụrụ Australian Labradoodle?
Ọ dị mfe ịsị na Aussie Labradoodle bụ otu ihe ahụ Ọkọlọtọ Labradoodle . Na naanị ihe dị iche bụ na ị gbakwunyere ebe o si. Ma ọ bụghị ihe dị mfe.
Ọ bụ ya mere anyị ga-eji gwuo miri emi na ụdị udiri mejupụta cutie a!
Ihe niile malitere na 1989 mgbe nwanyị kpuru ìsì chọrọ nkịta ọrụ. Ihe bụ nsogbu bụ na di ya na-arịa nfụkasị nkịta.
Wally Conron , Njikwa ozuzu maka Nduzi Nkịta Ọrụ na Australia, malitere na-arụ ọrụ na-eke a canine nwere nwere ọnọdụ zuru oke nke nkịta ọrụ na a hypoallergenic kootu.
Ọ gwakọtara nkịta abụọ dị ọcha nke kwekọrọ na nkọwa ahụ. Ọ họọrọ ndị na-arụsi ọrụ ike Labrador nweta na nonkpụrụ na-adịghị awụfu Poodle . N'ihi ya aha Labrador-Poodle ma ọ bụ Labradoodle .
Mgbe ihe ịga nke ọma ahụ gasịrị, Wally Conron chọtara ịzụlite ụdị ahụ.
Australia si Park Tegan na Rutland Manor enyere aka site na ịga n'ihu n'ihe Wally malitere. Ha nọgidere na-azụ Labradoodles iji mepụta nkịta ndị nwere ụdị uwe ha na-agbanwe agbanwe, ọnọdụ ha, na ọdịdị.
Maka anyị ka anyị ghọta ka ndị mmepe siri nwee ike imepụta agwa na-agbanwe agbanwe nke ụdị a, ọ ga-adị mkpa ka anyị tụlee etu esi mee Australian Labradoodle.
Gịnị Na-eme Australian Labradoodle?
Enwere ike ịkọwapụta Australian Labradoodle dị ka nke a ma ọ bụrụ na nke ọ bụla n'ime ọnọdụ 2 ahụ zutere:
Nzụlite Labradoodle ruru Ọgbọ nke ise
Ihe nkịta a nwere sitere na Labrador, Poodle, na American Cocker Spaniel
N'adịghị ka ndị ọzọ na-eto eto nwere nne na nna dị ọcha abụọ, Aussie Labradoodle nwere ike ịbụ nke ụdị atọ, ma ọ bụ bụrụ nsonaazụ nke ịzụlite Labradoodles na-aga n'ihu.
Na-aga n'ihu ozuzu pụtara na ị ga-agafe Labradoodles abụọ nwere nne na nna Labradoodle. Ozugbo ụmụ nkịta ahụ ha mepụtara tozuru oke, mee usoro ahụ ugboro ise (ọgbọ 5), ị ga-enweta ya Australian Labradoodle , agbụrụ dị iche iche. Nke ahụ bụ otú ha si mepụta ụdị a na mbụ.
Ma ọ bụrụ na i chere na nke ahụ bụ ozuzu ozuzu iji mee nkịta a dị ịtụnanya, òtù ndị na-emepe emepe Australian Labradoodle akwụsịghị ebe ahụ. Ha maara na ha nwere ike ị nweta ezigbo agwa ka ha zuo oke!
Iji mee nke ahụ, ha jiri nlezianya gbakwunye ụdị ndị ọzọ n'ime Labradoodle ahịrị nke ga- webata àgwà ka mma , na nkịta ndị ahụ bụ:
Spaniel Mmiri Irish
Uwe mkpuchi uwe
Onye America Cocker Spaniel
Tinye ha, tinyere Labrador na Poodle, mgbe ahụ Aussie Labradoodle nwere ngụkọta nke ụdị 6 nne na nna nwere ike .
Niile ụdị nne na nna nwere ihe iji weta tebụl, mana kasị nkịtị mix eji kee Australian Labradoodle bụ Poodle, Labrador Retriever, na American Cocker Spaniel.
Ndị mmepe nke ụdị a na-ejikarị American Cocker Spaniel eme ihe n'ihi na ọ bụ nkịta ikpeazụ ha gbakwunyere na Australian Labradoodle, ha hụkwara na ọ na-eweta àgwà na-agbanwe agbanwe karịa nkịta ndị ọzọ.
Ya mere, ka anyị banye n'ime ma tụlee àgwà ndị na-agbanwe agbanwe nke Doodle a mara mma.
Ọ bụ ihe a na-ekwukarị na anya abụghị ihe niile , Ma ebe ọ bụ na anyị na-adabere na eziokwu ahụ bụ na Australian Labradoodles bụ nanị ihe zuru oke, ọdịdị ha ga-emecha ndepụta nyocha gị.
Ha dị ka anụmanụ na-adọrọ adọrọ nnukwu na gbaa gburugburu, anya gbara ọchịchịrị nke ahụ ga-eme ka ị daa n'ịhụnanya! Offọdụ n'ime ha nwere anya anya nke ga-amalite na amba gbara ọchịchịrị na anya hazel-acha akwụkwọ ndụ. Ha nwere a nnukwu, imi yiri square .
Labdị imi nke Australian Labradoodle nwere ike ịbụ oji, acha acha, ma ọ bụ aja aja aja / pink, ma ọ ga-adịgasị iche dabere na uwe ha.
Aussie Labradoodles nwere a square, stocky ewu , ma nwee ọdụ nke na-esochi topline mgbe ọ na-agagharị ma ọ gaghị agbachapụ kpamkpam na azụ.
Kedu ka nnukwu ụlọ akwụkwọ Ọstrelia si dị na mbara?
N'agbanyeghị ebe ị bi na otu obere ma ọ bụ obere oghere gị, ị nọ n'ọchịchị! Ebe ọ bụ na Poodle nne na nna abịa na nha atọ , ya mere Aussie Labradoodle. All ị ga-eme bụ bulie!
Ọkọlọtọ-nha Australian Labradoodles dị ihe dị ka sentimita 21 ruo 24 n'ogologo (53 ka 61 cm) ma nwee ike ịba kilogram 45 ruo 77 (kilogram 20 ruo 35).
Ọkara Australian Labradoodles dị 17 sentimita 20 n'ogologo (43 ka 51 cm) ma nwee ike ịba kilogram 30 ruo 45 (kilogram 14 ruo 20).
Miniature bụ naanị ndị kachasị mma! Ha dị naanị sentimita iri na anọ ruo iri na isii (iri atọ na isii ruo iri anọ na otu), ha eruo naanị kilogram iri na ise ruo iri atọ.
Ikwesiri iburu n’uche nke ahụ ụmụ nwoke na-abụkarị ibu karia nkita nwanyi . Mana iji tụnyere nke ọma, nke a bụ eserese na-egosi nha nke Australian Labradoodle mgbe etolitere:
OZI OZI Ogologo Ibu ibu
Ọkọlọtọ Australian Labradoodle
21 ruo 24 sentimita asatọ
(53 ka 61 cm)
45 ruo 77 pound
(20 n'arọ 35)
Ọkara Australian Labradoodle
17 na 20 sentimita asatọ
(43 ka 51 cm)
30 ruo 45 pound
(14 n'arọ 20)
Sentimita 14 ruo 16
(36 ka 41 cm)
15 ruo 30 pound
(7 ka 14 n'arọ)
Ebe ọ bụ na ha dị na nha atọ, otu ulo ma ọ bụ a ulo nwere oke nha ga-ezuru ma dabara adaba iji mee ka nkịta a nwee obi ụtọ. Ihe dị mkpa bụ na ha na-emega ahụ kwa ụbọchị nke mgbatị ahụ na ọgụgụ isi.
Uwe mkpuchi Labradoodle nke Australia na Agba
Anyị maara na nke a na-acha uhie uhie na-adị ka nwa agbọghọ na-eme enyi, ma ị maara na ọ nwere Uwe mkpuchi atọ dị iche iche ?
Ejiri ajị anụ: Ndị a dị nro dị nro ma nwee ike ịmalite site na ntutu fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke na-emeghe ma ọ bụ nke na-emeghe.
Ejiri ajị anụ: Dị ka ajị atụrụ ma nwee owu yiri owu na aka. Ọ dị ka Poodle’s mana o nwere eriri looser na-emeghe ngwa ngwa n’ahụ.
Uwe-ajị anụ: Ma ọ kwụ ọtọ ma ọ bụ dị ntakịrị, ụdị ntutu ahụ dị njọ na-enwe mmetụta ọ nwere ike ịnwe isi nkịta ahụ. Ọbụlagodi na ịchọrọ Doodle gị ka ọ bụrụ onye nwere ntutu dị mkpụmkpụ ma ọ bụ ogologo ntutu, ụdị a bụ uwe mkpuchi dị ala ma nwee ọkwa dịgasị iche iche.
Aussie Labradoodles bịakwara na a dịgasị iche iche na agba , dị ka parti, ọcha, aprịkọt, chocolate, ojii, merle, na ndị ọzọ!
Ọ bụrụ n’ikpebie inweta nwa nkịta Australian Labradoodle, ya ejula gị anya ma ọ bụrụ na ọ bụ ya kootu agba mgbanwe. Ọ ga-agba ọchịchịrị ma ọ bụ daa mbà ka ọ na-eto.
Gba alụkwaghịm nke Aussie Labradoodle’s Hypoallergenic Coat
N'agbanyeghị ụdị uwe ụlọ Australian Labradoodle gị nwere, jụọ onwe gị na mbụ: “ Kedu ụdị ọdịdị m chọrọ ka nkịta m nwee? ”Na“ Ogologo oge ole ka m chọrọ ka uwe ya bụrụ? ”.
Ebe ọ bụ na a na-emepụta uwe Australia Labradoodle na-aga n'ihu na afọ 35 gara aga, ha bụ dị anya site n'inweta àgwà ịwụfu nke Labrador.
Mana n’agbanyeghi na ha bu udiri anaghi agbafu, ha ka choro ejiji mgbe nile.
Nwere ike ihicha uwe Doodle gị ugboro abụọ n'izu iji gbochie matting, nakwa iji mee ka ajị anụ ya dị mma ma dị ọcha. Ọ bụrụ na nkịta gị kachasị n'ime ụlọ, na-ehicha ụbọchị ole na ole na oge ụfọdụ saa aru ga-ezu.
Sessionslụ nwanyị mgbe ị na-alụ nwanyị ọhụrụ nwekwara ike ịpụta oge gị na nkịta gị ịnọkọ, mana ọ bụrụ na ịmara na ịchọrọ enyemaka ọkachamara, cheta kpọga ya onye na-edozi nwoke ọ bụla n’ime ọnwa abụọ ọ bụla ruo ọnwa atọ idowe uwe dị mfe iji lekọta.
Naanị ma ọ bụrụ na ị na-eche, ụdị shaggy bụ otu n'ime ntutu isi ama ama ma ọ bụ chọọ Australian Labradoodles.
Ọ bụ ezie na anyị nọ n’isiokwu gbasara ịchụ nwanyị, echefula iwepụ mbọ gị Australian Labradoodle mbọ ọ bụla izu abụọ na anọ ma gbanye ya ezé kwa ọnwa . Maka ntị, mee nyocha kwa ọnwa ma wepu ntutu dị n'ime oge iji zere ibute ọrịa n'ihi enweghị ikuku.
Nke a bụ vidiyo na-egosi ntuziaka isi edozi maka Australian Labradoodles site na ALAA:
Aka aka, nkịta niile dị egwu! Mana ị maara na ọgbọ mbụ Labradoodle na-emewanye mkpọtụ? Australian Labradoodles dị anya na nke ahụ. Ha bụ wetuo obi , edozi , kensinammuo , na tozuru etozu . Ma ha ka diri dị nnọọ ọchị ịnọnyere, ma ọ bụ ime ụlọ ma ọ bụ egwuregwu n'èzí!
O nwekwara ihe mere ị ga-anụ ma gụọ ọtụtụ ihe ọma gbasara ụdị a, ọ bụkwa n’ihi ezigbo agwa o nwetara n’aka ndị mụrụ ya.
Dị ka Poodle, Australian Labradoodles bụ dị nwayọọ, dị gara gara, ma nwee omume enyi . Ha na-enwe ọ toụ ịnọnyere ha n'ihi na ha nwere ike ịbụ ndị mara mma atọ ọchị mgbe ụfọdụ!
Bredị a ga-abụkwa dị mma maka ezinụlọ na ụmụaka. Naanị jide n'aka na ị na-elekọta obere ụmụaka gị oge ọ bụla ha gbara nwa nkịta ahụ gburugburu ma ọ bụ obere Australian Labradoodle gị iji zere mmerụ ahụ.
E wezụga nke ahụ, Aussie Labradoodles bụ iguzosi ike , ezi na ndị ọzọ na nkịta na anu ulo , adịghị atụ egwu igosipụta ịhụnanya na nraranye ha, ma nnukwu ndu na nkịta ọgwụgwọ - dị ka Labrador Retriever na nne na nna Spaniel.
Na ihe niile ha nwere ike inye, olee otu ị ga-esi gosi nkịta ị hụrụ ha n'anya? Na nlekọta kwesịrị ekwesị, n'ezie!
Ercmee mmega ahụ ka ụlọ ọrụ Australian Labradoodle chọrọ?
Agbanyeghị na ụdị a dị mma maka ụdị ụlọ ọ bụla, nkịta gị ka na-achọ mmega ahụ iji hapụ ike ya niile site n'oge niile ejiri n'ime ụlọ.
Ọ bụrụ na Aussie Labradoodle na-agwụ ike, achọghị omume nwere ike ịmalite. Ihe ikwesiri ime bu ka inwee obi uto ya site n’inye ya otutu ihe omume na omume aru.
Australian Labradoodle nwere ọkwa ike dị ala na-agafeghị oke, ya mere a 30 ruo 40-nkeji ịgagharị kwa ụbọchị ga-ezuru.
Ewezuga ịgagharị, ị nwekwara ike were nkịta gị gaa ịgba ọsọ, ịgba ọsọ, ịgagharị, ma ọ bụ, ọ bụrụ na ọ bụ ihe omume ntụrụndụ gị, ọbụlagodi ịchụ nta! Australian Labradoodles hụrụ mmiri n'anya , kwa. Ọ bụrụ na ị nwere ọdọ mmiri, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị bi n'akụkụ ọdọ mmiri ma ọ bụ osimiri, weta ya, ị ga-ahụ ya ka ọ na-adanye na ịgba ma na-egwu mmiri.
Ọ bụrụ na ịnweghị oge iji kpụ nkịta gị maka ịgagharị, ogige azụ a gbara ogige bụ ọnọdụ dị mma iji soro ya kpọta. Egwuregwu a na-arụ ọrụ nwere ike jupụta 20 na 30 nkeji oge mmega ahụ chọrọ maka Aussie Labradoodle.
Ewezuga mmega ahụ, Doodle gị ga-achọkwa mkpali nke uche. Ya mere na-enye ya ntụrụndụ n'ime ụlọ dị ka ita, puzzle, ma ọ bụ tug ihe egwuregwu ga-ama ya aka n’ule.
Fọdụ ngwaahịa ndị a ma ama maka ụdị a bụ Kong Oke na Mpụga Hound Nina Ottoson Nkịta brik Na-emeso Nkịta Nkịta Egwuregwu . Inye gị Aussie Labradoodle ọtụtụ nhọrọ ga - egbochi ya ike gwụ ya, ọ ga - emekwa ka uche ya pụọ ​​na ịchacha arịa ụlọ ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ gị.
Zụ ụlọ akwụkwọ Labradoodle nke Australia
Otu ihe kacha mma gbasara canine a bụ na ha bụ smart ma dị mfe ịzụ . Ha nwere ike iburu iwu gi na agh ugh oo teach na-ak uziri ya n’ime obere oge.
Amụma! Site na mgbe ị kpọbatara nwa bebi gị nke Australian Labradoodle, guzobe onwe gị dị ka onye isi nke ụlọ ma ọ bụ ezinụlọ. Bredị a nwere ike ịkarị gị ma zụlite omume na-akparị mmadụ ma ọ bụrụ na a zụliteghị ya, mmekọrịta ya na ndị a zụrụ ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
Guzosie ike ma wetuo obi mkpụrụ ma lụsoo nsogbu omume ahụ ọgụ na mmega ahụ na nke uche, ma gbaa mbọ hụ na ị kwenyere rapara na usoro . Na-etinye oge ọzụzụ gị n'ọrụ ma dị mma. You nwere ike ime nke ahụ site na iji ọgwụgwọ, ụgwọ ọrụ, na otuto ịkwali nkịta ọ bụla.
Nọgide na-enwe ndidi . Ọ bụrụ na nkịta gị ma ọ bụ nwa nkita enweghị ike ịgbaso ntụziaka ma ọ bụ mere ihe ọghọm n’elu kapet gị kacha amasị gị, ejila ụda ma ọ bụ okwu siri ike, ma dị nwayọ. Ahụmahụ ọjọọ agaghị enyere gị aka.
Lelee ma gee ntị otu onye nwe nkịta a si enye ntuziaka / aghụghọ dị mfe mgbe ọ na-agba Teddy ume na ọgwụgwọ na otuto.
Ka anyị gaa na ahụike zuru oke nke ụdị a dị ịtụnanya n'ihi na ọ bụghị naanị na ị ga-eri nri na uche mkpụrụ obi enyi gị, kamakwa mkpa anụ ahụ nke Aussiedoodles.
Australian Labradoodles nwere àgwà magburu onwe ya, mana ndị nwe nkịta nwere ibu ọrụ karịa nanị ịwepụ nkịta ha maka ịgagharị.
Ewezuga iketa nsogbu ahụike sitere na nne na nna ya, Aussie Labradoodle bịara nha atọ. Nke ahụ pụtara na ị ga-a attentiona ntị na mkpa ụfọdụ nke Doodle ị họrọ.
Ihe ndị dị mfe dịka ịzere Mini Australian Labradoodle gị site na ịwụ elu ma ọ bụ ịrịgo na ịrịgo akwa mgbago nwere ike inye aka gbochie nsogbu nkwonkwo, ma ọ bụ ịmara otu esi azụ ya, ka ọ ghara ibu oke ibu. A sị ka e kwuwe, ihe kacha mma ị ga-eme iji gosi na ị hụrụ anụ ụlọ gị n’anya bụ ilekọta ya.
Ihe oriri kwesịrị ekwesị maka nkịta nọ n'ọrụ
Nkịta niile kwesịrị inweta nri dị elu, ụdị- na oke kwesịrị ekwesị iji hụ na ha dị mma.
Ya mere tupu ịhọrọ otu nri ma ọ bụ nri nkịta maka Aussie Labradoodle gị, jụọ onye ọhụụ gị nke mbụ ka o doo gị anya na ị ga-eri nri na nri na-edozi ahụ.
Nye ụlọ nyocha Australia 2 na ọkara ka iko 3 nke nkịta nri kwa ụbọchị na kewaa ya na nri abụọ .
Ọ dị gị n'aka n'oge ị na-azụ nkịta gị, ọ bụrụhaala na agụụ anaghị agụ ya ma ọ bụ n'ụzọ ụfọdụ na-agbanwe agbanwe. Ihe ọtụtụ ndị nwe ha na-eri bụ enyi ha furry otu ụtụtụ na otu anyasị.
Ọ bụrụ na ị họrọ maka arụrụ n'ụlọ ma ọ bụ nke ndu ma ọ bụ ọbụlagodi elu-edu ụmụ mmadụ-ọkwa nkịta nri , ihe ị ga - eme bụ belata oke nri akọrọ ị na - enye enyi gị aji iji gbochie ya ịba abụba.
Ọ bụrụ na Labradoodle nke Australia gị buru ibu
Nkịta chubby nwere ike ịmasị mara mma, mana ị ga-etinye ahụike ahụike gị na anụ ụlọ gị n'ihe egwu. Ọ bụrụ na i chere na ọ na-ebuwanye ibu, ị nwere ike kewaa ya kwa ụbọchị iko abụọ ma ọ bụ atọ nke nri nkịta n’ime nri atọ karịa abụọ a na-emebu.
Na agbanyeghị ka ụlọ akwụkwọ Australian Labradoodle gị jiri anya ndị ahụ hụrụ n'anya na-arịọ arịrịọ, enyela ya iberibe tebụl na nri nri mmadụ.
Ihe ndị ọzọ ị nwere ike ime iji nyere ya aka ka ọ ghara ibu ibu na-agbanwe na abụba dị obere ma nwee nnukwu nkịta.
Enwere otutu nri maka canines nke ga enyere ha aka ida pound mgbe na-eme ka nkwonkwo ha dịrị mma ebe oke ibu nwere ike imetụta ngagharị nkịta gị.
I kwesịkwara ịrapara nkịta na-emeso nke nwere obere kalori. Gbalịa ịnye mkpụrụ osisi kama, dị ka obere mkpụrụ apụl ma ọ bụ karọt.
Maka Australian Labradoodles ndị dị obere
Ebe ọ bụ na anyị nwere Labradoodles nke Australia nke nwere ike iri ọtụtụ, enwere ụfọdụ nkịta na-enweghị nnukwu agụụ ma nwee ike ịdị arọ. O nwere ike ịbụ na Doodle gị na-ere ọkụ n'ike, mana jide n'aka na ọ na-ebelata ọ bụghị n'ihi ọrịa na-apụtaghị ìhè.
Ọ bụrụ na ọ dị mma n'agbanyeghị na ọ dị gịrịgịrị, ị nwere ike inyere gị aka ka ị bulie ibu. Ị nwere ike tinye iko ozo nri nkịta n'ime nri ya kwa ụbọchị. Yabụ site na iko abụọ ruo atọ, ị nwere ike ịme ya na 4 ma kee ha n'ime nri abụọ ma ọ bụ atọ kwa ụbọchị.
I nwekwara ike gbanwee gaa nri nkịta nke ezubere maka ụmụ nkịta kama nke ndi okenye.
Ọ pụtara na ị gaghị enye nkịta gị iko karịa n'ihi na calorie na-abawanye dị mkpa iji hụ na nkịta puppy zuru oke.
Lelee ihe na ụlọ akwụkwọ Australian Labradoodle gị na-eri. Nwere ike ịhazigharị oge ị na-eri na etu nri ga-adị iji hụ ọrụ ọrụ. Hụkwa na anụ ụlọ gị na-emega ahụ ọtụtụ oge.
Iji mara ma Doodle gị ruru ogo ahụike ma na-echekwa ya, ọ ga-enyocha ule ahụike ọnwa isii ọ bụla ruo ọnwa iri na abụọ iji zere ịlaghachi na ịdị gịrịgịrị ma ọ bụ abụba.
Australian Labradoodle bụkarị ezigbo ahụike, mana ọ nweghị onye nwere ike ịhụ nsogbu ahụike niile nwere ike imetụta nkịta gị.
Ihe niile anyị nwere ike ime bụ ịmụ banyere nzụlite Doodle a na nsogbu ahụike nke nne na nna ka anyị wee mara banyere ha ma nwee olile anya, belata ma ọ bụ ọbụna zere ohere nke anụ ụlọ gị ịnweta nke ọ bụla.
Crossbreeds ketara nsogbu ahụike kachasị emetụta ndị mụrụ ha, ụfọdụ n'ime ndị ụlọ akwụkwọ Australian Labradoodle gị ga-enweta bụ:
I kwesịkwara ileba anya ma ọ bụrụ na Labradoodle nke Australia gị na-adịkarị ọkọ na ọkọ, nke nwere ike ịbụ ihe ịrịba ama na ọ nwere ihe nfụkasị ahụ.
Otu ihe nwere ike ime n’azụ ya bụ na Aussiedoodle gị nwere ike ịnwe ihe nfụkasị na nri ya dị ka ọka ma ọ bụ ọkụkọ. Ọbụghị naanị na ọ nwere ike ibute mgbakasị ahụ, kamakwa nsogbu nri.
Ga-atụlekwa ihe ndị dị mkpa dịka Doodle's gị afọ na ọnọdụ ahụ ike . Ihe dị ka, oke nri nwa nkita ga-achọ dị iche na ego ole ị kwesịrị inye okenye Australia Labradoodle.
Nwere ike ịgbanwe mgbe niile na hypoallergenic nri nkịta ma ọ bụ emeso n'ihi na gị na nke ahu anataghi-enyi na enyi Aussiedoodle. Ọ ga - enyere aka ijikwa, ọ bụghị naanị uwe ya na akpụkpọ ya, kama yana ahụike ya.
Ọ bụrụ na Doodle gị nwere ọhụụ anya, nlekọta kwesịrị ekwesị, na nhicha bụ ụzọ kachasị mma isi mesoo ya. Ma ọ bụrụ na ọ dị ka akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ agba ọ bụla ọzọ, gbaa agba na veti gị ka ị nyocha ya.
Na-arụ ọrụ ma soro onye ọkachamara ọkachamara tụkwasịrị obi ka ị rụọ ọrụ gị dị ka ike gị nwere ike ma eleghị anya (mkpịsị aka gafere) gị Australian Labradoodle ga-akarị nkezi ndu nke afọ 13 ruo 15 !
Ugbu a anyị mụtara ihe ndị dị mkpa ma ọ bụ ozi gbasara Australian Labradoodle, ka anyị gaa ebe ị ga-enweta otu.
Mgbe ụdị anụ dị iche iche metụtara, ị ga-egwu ala karị oge ọ bụla ị mere nyocha gị. Have ga-akpachara anya mgbe ị na-achọ breeder nke na-agbaso ụkpụrụ nke ndị edebanyere aha na ndị a ma ama.
Na mgbe ị kpebiri ịzụta, gbaa mbọ hụ na ị na-azụta ihe n’aka onye na-enwetaghị puppy puppy Australian Labradoodle site na igwe igwe nkịta.
You gaghị achọ itinye aka na nke ahụ ma na-akwado ha na mberede. Na mgbakwunye, a ga - enwe nnukwu ohere na n'ikpeazụ, a ga - enwe nsogbu na nkịta gị - ma ọ bụ ahụike ha.
Ego ole ka ụlọ ọrụ Australian Labradoodle na-efu?
An Labradoodle-awụba n'oké osimiri ga-enwekarị nkezi nke puppy 8, n'ihi ya, ha abụghị ndị na-adịkarị obere. Ma ụfọdụ n'ime ihe ndị ga-emetụta ọnụahịa ahụ ga-abụ onye na-azụlite ya, usoro ọmụmụ ya, na ọnọdụ ya.
N'ozuzu, nwa nkịta Australian Labradoodle ga-efu ihe $ 2,700 ka $ 3,000 .
Gịnị kpatara ụlọ nyocha Australia ji dị oke ọnụ?
Ọ bụghị naanị n'ihi na Australian Labradoodle bụ nkịta na-emepụta ihe, kamakwa n'ihi ngwaahịa ozuzu .
Ọ bụrụ na onye na-azụ ihe jiri ọgbọ Doodle dị elu wee mee ọtụtụ nyocha ahụike na nne na nna, ọ ga-abụ ihe ezi uche dị na Aussiedoodle dị oke ọnụ.
Ebe ọ bụ na Aussiedoodle abụghị ngwakọ ngwakọ gị, ndị na-azụ ihe na-etinye oge ha, nraranye, na ego ha iji lekwasị anya n'ịmepụta ụdị nkịta a.
Na nke ahụ na-eme Australian Labradoodles ka ọ bụrụ ego gị. ’Ga-akwụ ụgwọ maka a elu-edu canine enyi na àgwà ndị na-agbanwe agbanwe ma dị ịtụnanya.
Ndị Ọzụzụ Ahịa Australia Labradoodle
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịzụta nwa nkita Aussie Labradoodle, ị nwere ike lelee ya otu breeders nke Australian Labradoodle Association of America.
The Australian Labradoodle Club of America na-enye gị nhọrọ iji hụ International, US, na Canada ndị otu breeder .
Ewezuga ndị ahụ, ebe a bụ ụfọdụ ndị ọzọ na-azụ ihe ntanetị n'ịntanetị nke na-elekwasị anya na ụdị Labradoodle na Australian Labradoodle:
Nnukwu Obodo Australia Labradoodles (Keene, NH, US)
N'ịnabata ma ọ bụ Rehoming Australian Labradoodles
Ọ bụrụ n’ikpebie iwere, nnapụta, ma ọ bụ rehome ụlọ ahịa Australia, anyị na-akwado 100%!
Gaghị enweta otu enyi anụ ọhịa; ị na-azọpụtakwa ndụ nkịta ahụ.
Lelee weebụsaịtị ndị a na-enye ọtụtụ nhọrọ maka gị:
Doodle Rock Nnapụta (Dallas, Texas)
Hale nke Australian Labradoodles (Central California)
Ugwu Ugwu Park Park (Portland)
Anyị kwuru na e nwere òtù ma ọ bụ klọb na-arụsi ọrụ ike iji kpuchido ma gaa n'ihu mmepe nke larịị Labradoodle nke Australia, ma hụ na a na-agbaso ozuzu nke ọma.
Ndi otu a kwesiri ka ekwenye, ha bu:
LAA - Radtù Labradoodle nke Australia
IALA - Australiantù Australian Labradoodle International
FTAA - Australian Labradoodle Club nke America
Ọ dịghị - Association nke Australian Labradoodle zuru ụwa ọnụ
ALAEU - Labtù Australian Labradoodle Association Europe
Klọb ndị a na-amụkwa ụdị ụdị nkịta kwesịrị ka ekwere ka iwebata nke ọma na ahịrị ndị ahọpụtara.
Ma ebe ọ bụ na Australian Labradoodle bụ ngwakọ ma ọ bụ nkịta na-emepụta ihe, ihe American Kennel Club (AKC) anaghi amata udiri a, mana Dog Registry of America Inc (DRA) amaghi.
You chọrọ ịmata ihe ndị ọzọ Poodle mixes si n'ebe? Inyocha ngwa ngwa banyere esemokwu ha si na Australian Labradoodle ga-enye aka.
Ọ bụkwa ihe dị mma ịmụ banyere ụdị Doodles ndị ọzọ n'ihi na nke ahụ pụtara na ị ga-enwe nhọrọ ndị ọzọ ma ọ bụrụ n'ezie na ị ga-achọ ụdị nke ejiri Poodle gafee.
Labradoodle nwa nkita
Otu n'ime esemokwu dị n'etiti abụọ ndị a bụ na ụfọdụ Labradoodles na-awụfu ebe Australian Labradoodles anaghị eme, nke mere ka ha bụrụ nhọrọ a ma ama maka ndị nwere nfụkasị ahụ .
Labradoodles bụ ezigbo nkịta ezinụlọ mana ọ nwere ike ịme mkpọtụ n'ihi ya onye toro eto ga-elekọta ma ọ bụrụ na ha na ụmụaka.
Ọ bụrụ na Labrador-Poodle mix adịghị enweta nlebara anya na mmega ahụ zuru oke, ha nwere ike ịmalite okwu gbasara omume dịka ịmị ọkụ ma ọ bụ ịta nri. Australian Labradoodles bụ wetuo obi , agaghị eme ihe mgbe ị na-agwụ ike, ma dị mfe ịzụ.
Ma Labradoodles nwere oke ịhụnanya ma bụrụ nnukwu nkịta ọrụ.
Bernedoodle nwa nkita ( isi mmalite )
Dị ka Australian Labradoodles, Bernedoodles dị nwayọọ ma dị nwayọọ. Ma Bernes nwere ike isi ike n'oge ha na-eto eto, ma ị nwere ike ịtụ anya na omume ahụ ga-akwụsị ka ha na-eto.
Bernedoodles dikwa goofy ma mee ihe nkịta ezinụlọ dị mma , ma ha nwere ike ịnwe nsogbu ịkwado ezinụlọ na-arụ ọrụ n'ihi na ike ha adịghị ike.
Ha abụghịkwa maka obere ụlọ ma nwee ike ịnọnyere ndị bịara abịa. Ewezuga nke ahụ, ha dị mfe ịga.
N'ihe banyere ọnọdụ, Goldendoodle dị ka Australian Labradoodle.
Enyi na enyi, mmekọrịta mmadụ na ibe, na mmetụta ịhụnanya, ọ bụghị ihe ijuanya na ha na-eme ọfụma dịka nkịta nduzi, ọrụ, ma ọ bụ ọgwụgwọ nkịta. The Golden Retriever-Poodle mix bụ akwa na ụmụaka na anu ulo ọ dịkwa mfe ịzụ.
Goldendoodles agaghị eme nke ọma ma ọ bụrụ na ị hapụ naanị ya ruo ogologo oge ma ọ bụ na ị naghị enye ya nlebara anya zuru oke.
Sheepadoodle ( isi mmalite )
Na Sheepadoodle bụ ozuzu dịkwa mfe ịzụ n’ihi na ha nwere ọgụgụ isi.
Ha ga-eme nke ọma na ezinụlọ nwere ụmụaka, mana ị ga-elekọta.
Nkịta a echefubeghị àgwà ịzụ anụ ya ma gbalịa ime ya ndị otu egwuregwu ha, ọ nwedịrị ike ịmakụ!
Ka o sina dị, Sheepadoodles nwere obi ụtọ ma nwee ezigbo nche.
Na mkpokọta, ụdị a zuru oke ka ọ gafere ihe niile ị ga-achọ mgbe ị na-achọ na ịhọrọ nkịta: oke iwe ma ọ bụ àgwà, ọgụgụ isi , agbanwe agbanwe na nhazi , na uwe elu-elu .
Mana n'ezie, iji mezuo mkpebi, ị ga-atụle uru na ọghọm nke inwe ụlọ akwụkwọ Labradoodle nke Australia.
Doodle a kwesịrị ekwesị maka ọtụtụ ụlọ na ezinụlọ, yana ndị mmadụ na-arịa ọrịa allergies - ọbụlagodi ndị na-ahọrọ obere ọgba na isi n'ime ụlọ ha.
Coatdị uwe mkpuchi ndị kachasị mma, nke bụ ụdị ajị anụ na ajị anụ, na-adịkarị mfe eriri ma matting n'agbanyeghị. Yabụ gị na Aussie Labradoodle ga-adị mkpa iji usoro ejiji.
Na nkịta a chọrọ ọtụtụ ihe ị na-eme kwa ụbọchị - site n’ịga ije na ịgba ọsọ, na ịta ata na iche echiche. Ọ bụrụ na ị na-anọkarị n'ihi ọrụ ma ọ bụ na ị na-ahọrọ iji oge gị n'ime ụlọ, mgbe ahụ, canine a hụrụ n'anya na-abụghị maka gị.
Ngwakọta ụlọ ọrụ Australian Labradoodle bụ ụdị amamịghe ma nwee ike ịka mma karịa gị site na njirimara aghụghọ ya. Mana ọzụzụ oge na igosi onye bụ onye ndu nke mkpọ ahụ ga-eme ka Doodle gị mara ebe ya.
Na mkpokọta, ụdị a bụ nke kachasị dị nwayọọ pooch i nwere ike iche n'ihi na!
Kedu ihe ị chere banyere Labradoodle nke Australia? Mee ka anyị mata akụkọ na echiche gị niile gbasara Aussie Labradoodles, ọbụnakwa kesaa ụfọdụ ndụmọdụ ma ọ bụ ndụmọdụ!
Pịnye ya niile na ihe ndị dị n'okpuru ebe a ka ndị ọzọ mụta ma ọ bụ na-asọgharị akụkọ ifo gị!
nwa ojii nwanyị german niile na -azụ atụrụ
aha nkịta pụrụ iche pụrụ iche nwoke
ụlọ nyocha German shepard mix nwa nkita
kedu ka obere mkpụmkpụ si enweta
ụdị ahịhịa na -adị obere